कात्तिक २४ गते आइतबार सार्वजनिक बिदा - Nepal Insider
शाहरूखकी छोरी सुहानाको पहिलो फिल्म रिलिज…
रोकिराखेको बस पल्टिँदा ७० वर्षीया वृद्धाको ज्या’न गयो
रन्जन विष्ट भन्छन् – खेलाडीहरु नाइट क्लब जानु गलत, तर भाइ रक्सी खाँदैन
मिस वर्ल्डमा सहभागी हुन् लण्डन उडिन् अनुष्का श्रेष्ठ
पोखरामा हुँदै नेपाल भारतबीच सिमा सुरक्षा बैठक
कस्लाई थाहा बिहेकै पहिलो दिन दुलहीको यस्तो हर्कत हुन्छ भनेर ? प्रहरी समेत चकित खायो !
आज झन् बढ्यो सुन चाँदीको भाउ, तोलाको कति ?
अब बिद्युत महसुल पनि घटाउछु ढुक्क हनुहोस्
टोखामा आगो लाग्यो, पार्किङमा राखेकाे तीनवटा मोटरसाइकल खरानी
Home/समाचार/कात्तिक २४ गते आइतबार सार्वजनिक बिदा
कात्तिक २४ गते आइतबार सार्वजनिक बिदा
1,600 1 minute read
कात्तिक २४ गते आइतबार प्रदेश २ मा सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । मुस्लिम समुदायको पैगम्बर मोहम्मदको जन्म दिनको अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा दिइएको प्रदेशको आन्तरिका मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रबक्ता दिनेश साहले मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले आइतबार पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनको अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश २ सरकारले मुस्लिम धर्माम्बलीको पैगम्बर मोहम्मदको जन्म दिनको अवसर पारेर एक दिन बिदा दिनेगरी यसअघि नै आफ्नो विदा सम्बन्धी क्यालेण्डर बनाएको थियो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतको नयाँ नक्सालाई लिएर नेपालमा व्यापक विरोध भएको र नेपालले पनि एक पक्षीय निर्णय अस्वीकार्य हुने बताएको भन्दै भारतको आधिकारिक धारणा मागिएको थियो। तर भारतको हालै जारी गरेको आफ्नो
नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको भारतको दाबी छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविशकुमारले भने, ‘हाम्रो नक्सामा भारतको सम्प्रभू क्षेत्रलाई देखाइएको छ । र, नक्सामा सीमा हेरफेर गरिएको छैन ।’ तर नेपालसँगको सीमा विवादबारे दुई देशको संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सकिने उनले बताए । उनले सीमा विवादको विषय दुई देशबीचको सम्वन्ध विगार्ने ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ हुन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।
भारतले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतीय भूभागका रुपमा देखाइएको छ । यसलाई लिएर चर्को विरोध भएपछि सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको नक्सा स्वीकार्य नभएको बताएको थियो ।
भारतको विवादित नक्साका बारेमा जताततै वि*रोध भइरहेको छ । नेपाल, पाकिस्तान र स्वयं भारतमै पनि भारतको नयाँ नक्साको वि*रोध भइरहेको छ । नेपालमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले भारतीय नक्साको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको समयमा सरकारले कालापानी नेपाली भू-भागमा पर्ने दावी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । मन्त्रालयको ‘लेटर हेड’ मा जारी विज्ञप्तिमा संक्षिप्त हस्ताक्षर भएको, हस्ताक्षर कर्ताको नाम र ओहोदा उल्लेख नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अपुरो रहेको भन्दै नेपालभित्रै टिप्पणी भइरहेको समयमा यही विषयमा पाकिस्तानले भने भारतको कदमको कडा वि*रोध गरेको थियो । भारतले नक्सा जारी गर्दैमा स्थिति परिवर्तन नहुने पाकिस्तानले प्रष्ट पारेको थियो ।
पाकिस्तानले के भन्यो ?
भारतको नयाँ नक्सामा भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको जम्मु–कश्मीरलाई भारतले आफ्नो भूभागका रुपमा समेटेको छ । जम्मु–कश्मीर विवादका बारेमा भारत र पाकिस्तानका फरक धारणा रहँदै आएको अवस्थामा भारतले जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको ‘विशेष दर्जा’ खारेज गरी केन्द्र शासित प्रदेशका रुपमा नयाँ नक्सामा समेटेको छ ।
यस अतिरिक्त पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मीरलाई पनि भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । पाकिस्तानले भारतको सो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको नक्सा ‘त्रुटिपूर्ण’ र कानुनी रुपमा ‘अपुष्ट’ रहेको जिकिर गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र सुरषा परिषदको प्रासंगिक प्रस्तावको विरुद्ध हुने गरी भारतले जारी गरेको नक्सालाई पाकिस्तानले अस्वीकार गरेको थियो । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘भारतको राजनीतिक मानचित्रलाई पाकिस्तान खारेज गर्दछ’ भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको नक्सा अनुरुप भारतको नक्सा नरहेको पाकिस्तानको भनाइ थियो । स्रोत : रातो पाटि
काँग्रेस नेता गुरुङको निधन, को हुन नेता गुरुङ ?
जनताको र’गतमा महल ठड्याउनेको खुट्टा छोट्याइन्छ : विप्लब नेकपा
सरकारका प्रवक्ता भन्छन्, ‘ट्रम्प र पुटिन आए भव्य स्वागत गर्छौं’
जापानमा एक झुप्पा अंगुरको मूल्य १२ लाख रुपैयाँ !